Yiziphi izikhathi ezicacile kakhulu zokusebenzisa injini yokusesha iwebhu?
I-intanethi ihlala njalo ikhula futhi iqhubekela phambili. Nsuku zonke abantu balayisha amathoni kolwazi oluhlukile lwekhwalithi kuzinjini zokusesha. Ukuze uqonde ukuthi yikuphi okuqukethwe okungazuzisa abasebenzisi futhi bahlukanise kusuka kugaxekile, izinjini ezinkulu zokusesha ezifana ne-Google zidinga ukuthuthukisa nokubuyekeza izilungiswa zabo njalo. Ngokwenza kanjalo, banikeza ithuba kokubili abanikazi bewebhusayithi kanye nabasebenzisi abajwayelekile ukuba bazuze kusuka kudatha yekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, ukubuyekezwa okuvamile kwe-algorithm kwenza izinjini zokusesha ziphoqe ugaxekile kanye nabachwepheshe be-SEO abamnyama. Ngakho-ke, ukuze uhlale ku-TOP ye-SEO game, udinga ukuqaphela wonke amaveliveli embonini yokwenza injini yokusesha iwebhu futhi wenze ukuthuthukiswa okufanele kusayithi lakho. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezikhathi ezintathu ezichazayo isimo se-SEO futhi senze ochwepheshe be-SEO bashintshe izindlela zabo zokuthuthukisa iwebhusayithi.
Izinguquko ezidlulayo ekuthuthukiseni injini yokusesha iwebhu
Kubalulekile ukusho ukuthi phakathi neminyaka eyishumi edlule izibuyekezo ze-algorithm zeGoogle zishintshe kakhulu imithetho ye-search engine ukuthuthukisa. Ngesikhathi abanye abathengisi be-intanethi bewa phansi kwe-rankings ngemuva kokubuyekezwa kwe-Google, abanye abanikazi bewebhusayithi ababheke phambili babona leli thuba ukuthuthukisa izikhundla zabo ku-SERP. Namuhla sizokhuluma ngezibuyekezo ezintathu ezinamandla kakhulu ze-algorithm ezishintshile i-SEO yanamuhla.
Okokuqala ukubuyekezwa kwe-Google kwenzeka ngoNovemba 2003. Kuyaziwa ngokuthi ubuyekeza be-Google Florida. Lokhu kubuyekezwa kwakuyishintsho esikhulu kunazo zonke kwi-Google rankings ngalezo zikhathi. Inhloso eyinhloko yokubuyekezwa kweFlorida kwakuzoshaywa ochwepheshe be-SEO abasha abamnyama ababezama ukuphatha i-rankings. Yenzelwe ukugwema inqubo ye-SEO enomnyama njengesihluthulelo sokugxila. Igama le-'wordword stuffing 'liye lavela kusukela ezinsukwini zakuqala zokuthuthukiswa kwenjini yokuthuthukisa. Kuyindlela yokwenza shady eyenza abakwa-webmasters baxhase izikhundla zokusesha. Kuyindlela yokufaka amagama angukhiye athile noma isethi yamagama abalulekile ekuqukethwe. Njengomthetho la magama asesho awahambisani nokuqukethwe futhi aklanyelwe ngokuqondile i-bots search, kodwa hhayi kubasebenzisi abajwayelekile. Lezi zinkulumo zingabuyekezwa ngombhalo kaningi ukuthi kuzwakale kungokwemvelo. Ngakho-ke, ukuze uthuthukise isipiliyoni somsebenzisi ngesistimu ye-injini yokusesha, i-Google inqume ukupholisa amawebhusayithi lapho kukhonjiswa khona amagama angukhiye. Emva kwalokhu kushayisana, izindawo eziningi zalahlekelwa yizimoto futhi zahlupheka kakhulu. Kuthatha isikhathi esiningi nemizamo yabanikazi bewebhu ukubuyisela imithombo yabo yewebhu idumela. Kodwa-ke, kwakuyisifundo esihle kulabo abazama ukwephula izikhombisi-ndlela ezijwayelekile.
Isibuyekezo se-Google Panda
Esesibili ngobukhulu bayo nomthelela ezweni ledijithali kwakuyi-Google Panda update. Yethulwa ngoFebhuwari 2011. Inhloso eyinhloko yalesi sihlungi kwakuwukugwema amawebusayithi anokuqukethwe kwekhwalithi empofu ekusebenziseni indlela eya kwimiphumela yokusesha ye-TOP. Ngokwenza kanjalo, i-Google ingathanda ukubuyela kumasayithi aphezulu futhi afanele eduze ne-TOP ye-SERP futhi ithuthukise isipiliyoni somsebenzisi ngesikhathi sokusesha. Lokhu kubuyekezwa kwafinyeleleka ku-12% yemiphumela yokusesha. Amapulatifomu amakhulu kunawo wonke e-intanethi aphethe ukugeleza kwezimoto njalo alahlekelwe ngaphezu kwezivakashi ezingu-50% ngenxa yezikhundla zabo ze-SERP. Lokhu kubuyekezwa kwe-Google kulimaza kuphela lawo mawebhusayithi anokuqukethwe kwekhwalithi ephansi. Kwezinye izizinda, isimo asizange sishintshe ngokuphawulekayo. I-Google yenza kube sobala ukuthi ikhwalithi ephezulu kanye nokuqukethwe okuhambisana nomsebenzi okuzosebenza kuyoba nomvuzo ngezinga eliphezulu kakhulu, kuyilapho imibhalo engafundiwe ephansi ingahlawuliswa. I-Panda igxile ikakhulukazi kumasayithi anokuqukethwe okuncane. Lesi sihlungi kwakuyindlela enhle ye-Google yokukhomba amapulazi okuqukethwe ngokuqondile njengoba yayiba yinto enkulu emiphumeleni yokusesha nge okuqukethwe kwayo okuphansi okungewona okwehlukile okwakulindelekile ukukala ngenxa yevolumu. Ukuhlukumeza okukhulu kwemithetho akuzange kutholakale kusukela kulolu hlu lwe-Google kuze kube manje. Namuhla, i-Google iguqulela i-Panda njengengxenye ye-algorithm yesizinda esisemqoka. Isebenza njengengxenye yokuvuselela okuphuthumayo, inyanga ehlala njalo ngomjikelezo. Ngenxa yalokho, kwaba nzima ukwazi ukuthi isayithi libhekene nokubuyekezwa kwe-Panda noma cha.
Ukubuyekezwa kwe-Google Penguin
I-algorithm ye-Google Penguin ithunyelwe ngo-Ephreli 2012. I-algorithm ye-webspam eyenzelwe ukupholisa labo abangahambisani neziqondiso ze-Google. Lapho le algorithm ingenwe amandla, i-Google ikhishwe isitatimende esilandelayo:
".le algorithm imelela enye ukuthuthukiswa emizamweni yethu yokunciphisa webspam nokugqugquzela okuqukethwe okuphezulu. Ngenkathi singakwazi ukuveza izimpawu ezithile ngoba asifuni ukunikeza abantu indlela yokudlala emiphumeleni yethu yosesho nokwenza ngcono abasebenzisi abasebenzisi, iseluleko sethu kubakwa-Webmasters ukugxila ekwakheni amasayithi aphezulu adala ulwazi oluhle lomsebenzisi bese usebenzisa izindlela ze-SEO ezimhlophe (GOOGLE). "
Ihlose amawebusayithi asebenzisa izinhlelo zokuxhumanisa ezikhohlisayo ukuze afake izinga eliphezulu ku-Google. Labo abathengisi be-intanethi nabaphathi bewebhu abathola i-juice yokuxhumanisa kumasayithi abo besebenzisa amasu we-SEO omnyama we-SEO njengesixhumanisi sokuthenga noma ukuxhumanisa ukuvinjelwa kwavinjelwe. Lapho kukhishwa isibuyekezo se-Google Penguin, amasayithi athathe izinyathelo zokususa izixhumanisi ezingemuva ezingemuva angabuye aphinde abuyele. Kusukela kulo, i-Google inikeza ithuba lokususa izixhumanisi ezimbi ngokushesha futhi mahhala. Konke okudingayo ukusebenzisa i-Google disavow links ithuluzi. Labo abashaywe yi-Google Penguin update bekumele balinde kuze kube yilapho lesi silgorithm siphinde siphinde sithole izikhundla zabo.
Le algorithm isayithinta isikhundla sewebhusayithi njengekhwalithi nezixhumanisi ezifanele yingxenye ebalulekile yesistimu yesimo se-Google. Yingakho kungabiza idumela lakho lesayithi ukusebenzisa uhlelo lwe-SEO webhubhu elimnyama noma ukuqasha ithimba le-SEO elingasebenzi. Njengamanje, ukubuyekezwa kwe-Penguin kuhambe kakhulu ngemva kokusebenzisa kabi izixhumanisi kanye no-3,1% wale mibuzo Source .